Mutsvairo wevaroyi wekushongedza paHalloween | Mhizha On
Mutsvairo wevaroyi wekushongedza paHalloween
Jenny monge | | Decoration, Crafts, Mhizha dzeHalloween
Mhoroi munhu wese! Tinokuunzira imwe hunyanzvi ye shongedza paHalloween uye nezvinhu zvakasikwa: mutsvairo wemuroyi.
Iwe unoda kuona kuti ungazviita sei?
Zvishandiso zvatinozoda kugadzira mutsvairo wevaroyi vedu kushongedza paHalloween
Akaomeswa matavi emhando dzakasiyana dzatinogona kutora kubva mubindu redu kana kubva kumunda seni mune yangu.
Chidimbu chetambo kana tambo dzakasiyana kana nhema, micheka yepepuru kana orenji, chero chauinacho kumba.
Chinhu chekutanga kubvisa ese akaoma mashizha ayo matavi atakasarudza angave nawo.
Ipapo tichawana kuti chii davi rakakora kubva ipapo chichava mubato wemutsvairo wehuroyi hwedu.
Tichave tichityora nekuparadzanisa matavi akasiyana uye tichiaronga zvakaringana kutenderera kumucheto kwebazi gobvu. Unofanira tora muswe mutsvairo nevhoriyamu saka usatya kuisa matavi mazhinji, zvakanyanya kuve nani. Kana tangovaita vakarongedzwa sezvatinoda, tichagadzirisa matavi zvakanaka nekumonera chidimbu chetambo uye kuisunga zvakanaka.
With the kuchekerera misoro ngatiendei kuumba mutsvairo wedu. Isu tinocheka matavi anonamira kunze zvakanyanya kubva kumativi uye kumagumo emuswe. Kuti tigadzire mutsvairo wakanaka, tinogona kusarudza kuumbiridza nenzira mbiri: kusiya yakatwasuka kumagumo kana yakaita semuromo.
Kuti titore mutsvairo wedu Tinogona kuisa patambo chidimbu chemucheka werimwe rima kana orenji ruvara.
Uye gadzirira! Isu tava kukwanisa kushongedza imba yedu kana mukova nemutsvairo wehuroyi uyu.
Tinogona kuperekedza ichi hunyanzvi ne muroyi akapwanyika pasi pedhoo, kubva a katsi nhema yakagadzirwa nemakadhibhokisi, manhanga kana chero chinhu chine chekuita nevaroyi neHalloween.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Zviitiko zvakakosha » Mhizha dzeHalloween » Mutsvairo wevaroyi wekushongedza paHalloween
Anonakidza honye ine mavara makadhibhokisi
Kuputira machokoreti eHalloween